Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovaon'ny dia momba an'i Jamaika » Tsipika fitsangatsanganana norveziana mankany amin'ny seranan-tsambo any Jamaika
Ny minisitry ny fizahantany ao Jamaika, Edmund Bartlett dia nanambara fa namarana ny fifandaminana miaraka amin'ny orinasan-tsambo manerantany, Norvezy Cruise Line, i Jamaika mba hitondrana ny iray amin'ireo sambon'izy ireo any Montego Bay.
Hanomboka amin'ny 7 Aogositra 2021 ny serivisy Cruise Line Norvezy.
Nanome toky ny minisitry ny fizahan-tany ao Jamaika fa ny fitsipiky ny sambo fitsangantsanganana dia manaraka ireo kaomandy fiarovana COVID-19 henjana.
Ny sambo fitsangantsanganana an-tsambo izay manana mponina manodidina ny 3,800 50 eo ho eo, dia hiasa amin'ny fahafaha-manana 19%, mifanaraka amin'ireo kaonty COVID-XNUMX ankehitriny.
“Faly be aho manambara fa i Jamaika dia ho lasa seranan-tsambo ho an'ny Cruise Line Norveziana, izay hahita ny fiverenan'ny fizahan-tany fitsangantsanganana any amin'ny ranomasina Jamaikana amin'ny volana aogositra. Manantena ny handray azy ireo hiverina any amoron-dranomasina izahay, ary matoky aho fa ity fiaraha-miasa lehibe ity dia hanampy amin'ny ezaka ataontsika hanarenana ny sehatry ny fizahan-tany ary hampisondrotra ny toekarentsika amin'ny ankapobeny, "hoy i Bartlett.
“Na dia fantatsika aza fa misy ny ahiahy momba ny fiarovana ny indostrian'ny fitsangantsanganana amin'izao fotoana izao. Tianay ny manome toky ny besinimaro fa ny sambo fitsangantsanganana an-tsambo dia manaraka ireo kaody fiarovana fiarovana COVID-19 henjana. Niasa tsy an-kijanona koa izahay tamin'ny famolavolana ny paikady ilaina sy ny rafitra stratejika, izay hiantoka izany ho traikefa azo antoka, tsy misy filaminana ary azo antoka, izay hahasoa ny tsirairay, "hoy ihany izy.
Ny Joy Norvezy no sambo izay hampiasaina hitaterana ireo mpandeha hiainga Jamaika, ary ireo zotram-pitaterana dia ahitana fonosana maharitra 7 andro mivoaka avy any Montego Bay.
"Amin'ny farany, ilay sambo, izay misy mponina manodidina ny 3,800, dia hiasa amin'ny fahafaha-manana 50%, mifanaraka amin'ny kaonty COVID-19 amin'izao fotoana izao ho an'ny orinasan-tsambo fitaterana an-dranomasina. Ny mpandeha dia takiana ihany koa hanao vaksiny feno ary hanao fitiliana alohan'ny hiatrehany ilay sambo, "hoy ny fanazavan'ny minisitra Bartlett.
Miaraka amin'ity fanambarana ity, i Jamaika dia manatevin-daharana toerana maro any Karaiba hafa izay ho lasa tokantranon'ny fitaterana sambo fitsangantsanganana.
Orinasa mpitsangatsangana iraisampirenena izay miasa marika marobe, ohatra, ny Cruise Line Holdings Ltd., Oceania Cruises, ary Regent Seven Seas Cruises. Miaraka amin'ny andiam-sambo mitambatra miisa 28 miaraka amin'ny fari-tany 59,150, ireo marika ireo dia manolotra làlana mankany amin'ny toerana 490 mahery manerantany. Ny orinasa dia voatendry hampiditra sambo fanampiny sivy amin'ny 2027.